Indho ku hayn iyo xiritaan - Migrationsverket
Ka warhaynta iyo gaynta xabsiga (xidhida)
Uppsikt och förvar – somaliska
Haddii Wakaalada Socdaalka Swedishka ay samaysay qiimaynta inay jirto khatar aad ka baxsan doonto isku deyada in lagu mastaafuriyo ama haddii kale aad dhuumato, ama aanad kula shaqayn qaabab kale, xaaladaha qaarkood waxaad haysan kartaa go’aanka ku saabsan ka warhayn dusha ah oo adiga kugu lid ah. Haddii Wakaalada Socdaalka Swedishka ay ka fekerto in ka warhayntu aanay ku filayn, waa lagu xidhi karaa.
Haddii aad tahay 18 sano jir ama ka wayn tahay, waxaa lagu saari karaa ka warhayn ama waa lagu xidhi karaa haddii ay lama huraan tahay in la baadho, tusaale ahaan, aqoonsigaaga ama xaqa aad ku joogayso Sweden. Waxaa sidoo kale lagu saari karaa ka warhayn ama waa lagu xidhi karaa haddii aad hesho, ama ay suuragal tahay inaad hesho, go’aanka caydhinta ama mastaafurinta oo Wakaalada Socdaalka Swedishka ay rumaysan tahay inay jirto khatar inaad dembiyo ku geli doonto gudaha Sweden, dhuumanayso, ka baxsato in lagu mastaafuriyo, ama haddii kale aad xanibto ama caydhinta ama mastaafurinta ama ay ka dhigto mid aad u adag.
Ka warhayntu waa qaabka Wakaalada Socdaalka Swedishka ay ku xaqiijiso in ay ku heli karto masuuliyiinta dowladdu. Haddii aad haysato go’aanka in lagaa warhaynayo oo la soo saaray iyaddoo adiga kugu lid ah, tan macnaheedu waxa weeye waxa waajib kugu ah inaad iska diiwaangeliso wakhtiyo gaar ah miduun booliska ama Wakaalada Socdaalka Swedishka magaalo gaar ah. Meesha iyo goorta lagaaga baahan yahay inaad is diiwaangeliso waxaa lagu sheegay go’aanka. Waxaa sidoo kale lagaaga baahan karaa inaad soo dhiibto baasaboorkaaga ama warqaddahaaga aqoonsiga ee kale si loo ilaaliyo.
Go’aanka khuseeya ka warhaynta waxa uu socdaa ilaa lix bilood si kastaba ha ahaatee waa la kordhin karaa. Caadi ahaan waxaad iman doontaa baadhitaanka hadalka ah ka hor inta aanay Wakaalada Socdaalka Swedish kordhin go’aanka ka warhaynta.
Rafcaan ka qaadashada go’aanka ka warhaynta
Go’aanka khuseeya kor kala socodka ama ka warhaynta rafcaanka waxaa laga qaadan karaa maxkamadda rafcaanada socdaalka wakhti kasta. Ma heli kartid la taliyaha dad waynaha si fudud sababtoo ah waxaa lagu siiyay go’aanka ka warhaynta.
Wakaalada Socdaalka Swedishka way ku xidhi kartaa haddii qiimayntayada aanay ku filnayn ka warhaynta si aanu kuula xidhiidhi doono. Tani way dhici kartaa, tusaale ahaan, waxaad haysataa go’aanka kugu lidka ah ee ku saabsan ka warhaynta si kastaba ha ahaatee ma timaadid oo naftaada kama warbixisid markii aad sidaas samayn lahayd, ama haddii adiga haddii kale aanad la shaqaynin Wakaalada Socdaalka Swedishka.
Xabisida macnaheedu waxa weeye waxaad degenaanaysaa guri xayiran oo dusha ka xidhan oo aanad ka tegi karin. Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay ka masuul tahay hoygan. Shakhsiyaadka xabsiga loo qaaday oo la xidhay waxay leeyihiin xaqa ay ku helaan booqashooyinka, ilaa xadka aanay faragelin hawl galada hay’ada. Xaaladaha qaarkood, Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay go’aan ka gaadhi kartaa inay dusha kala socoto booqashooyinkan.
Marka xabsiga lagugu hayo, waxaad leedahay suuragal ahaanshaha gunno maalile ah hadduu aanad lacagtaada haysan.
Akhri wax badan oo ku saabsan gunnooyinka maalinlaha ah iyo gunnooyinka gaarka ah
Gaar ahaanshaha, xuquuqaha qarsoodiga, iyo amniga
Iyaddoo ay sababtay sharciga qarsoodiga, shaqaalaha Wakaalada Socdaalka Swedishka uma shaacin karaa kooxaha saddexaad kuwa oo xabsiga ku jira iyo halka ay degden yihiin. Wakaalada Socdaalka Swedishka sidaas awgeed uma shaaciso qoyskaaga iyo saaxiibada halka aad joogto, si kastaba ha ahaatee waxaad leedahay suuragal ahaanshaha inaad laftaadu kala xidhiidho halka lagugu hayo.
Kuwan ku jira xarunta xabsiga waxay heli doonaan telefoon iyo Internat. Kamaradaha ama telefoonada leh kamaradaha lama oggola xarunta xabsiga si loo ilaaliyo gaar ahaanshaha iyo xuquuqaha qarsoodiga dadka jooga. Waa suuragal in la soo amaanaysto telefoonka gacanta oo aan kamarad lahayn haddii aad u baahato. Waxaa sidoo kale jira walxo kale oo aanad heli karin marka lagugu hayo xabsiga iyaddoo ay sababtay asbaabo amniga ah. Haddii Wakaalada Socdaalka Swedishka ay ka shakido inaad haysaso shay aan laguu oggolayn inaad haysato, shaqaalaha waxa uu leeyahay xaqa inuu adiga kugu samayso baadhida jidhka.
Raga iyo haweenka iyo carruurtu waxay joogaan xarumaha xabsiga ee Wakaalada Socdaalka Swedishka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaybo gaar ah oo xarunta xabsiga ah halka raga aan, xaaladaha qaarkood loo oggolayn inay joogaan. Haddii ay lama huraan u tahay kala dambaynta iyo amniga xarinta, Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay go’aan ka gaadhi kartaa in lagugu hayo meel ka gooni ah kuwa kale ee jooga xarunta xabsiga.
Go’aanka khuseeye xabsi ku xidhida waxa uu shaqaynayaa muddooyin kala duwan, iyaddoo ku xidhan sababta laguu soo xidhay. Go’aanka khuseeya xidhida dib ayaa loo soo cusboonaysiin karaa ilaa ugu badnaan labba iyo toban bilood, iyaddoo ku xidhan asbaabaha go’aanka in qofka ku sii haynta xarunta xabsiga la gaadhay. Qofka lagu xukumay mastaafurinta iyaddoo ay sababtu tahay gelida fal dembiyeed waxaa lagu hayn karaa xabsi muddo aan ka badnayn labba iyo toban bilood.
Rafcaan ka qaadashada khusaysa xidhida
Go’aanka khuseeya in xabsi ama qofka meel lagu hayo rafcaan waxaa lagaga qaadan karaa rafcaanada maxkamadda socdaalka wakhti kasta. Go’aanka ay gaadheen shaqaalaha Wakaalada Socdaalka Swedishka gudaha xarunta xabsiga sidoo kale caadi ahaan waxaa rafcaan lagaga qaadan karaa maxkamadda rafcaanka ee socdaalka gudaha saddex todobaad laga bilaabo maalinta aad go’aanka heshay. Kuwan la xidhay waxay xaq u yeelan karaa la taliye si uu uga caawiyo si ay wax lacag ah u siiso dowladdu.
Haddii aad ka yar tahay da’da 18, Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay go’aan ka gaadhi kartaa inay kaa warhayso adiga haddii aad heshay go’aanka caydhinta ama mastaafurinta. Haddii aanad si sax ah u raacin sharciyada ka warhayntaada marka ay tahay wakhtiga la diyaarinayo safarkaaga ka bixida wadanka, Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay go’aan ka gaadhi kartaa inay xabsi kugu hayso adiga.
Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay sidoo kale go’aan ka gaadhi kartaa inay kaa warhayso adiga haddii aad haysato, ama ay suuragal tahay inaad haysan doonto, go’aanka caydhinta la soo saaray ee adiga kugu lidka ah ee si degdeg ah loo fulinayo, oo ay caddahay inaadan la shaqayn doonin isla markaaba si aad uga tagto Sweden. Haddii Wakaalada Socdaalka Swedishka ay samaysay qiimaynta ka warhaynta inaanay aad ugu filnayn in laga hortaggo inaad ka baxsato isku deyada in lagu mastaafuriyo ama haddii kale aad dhuumato, waxaanu kugu hayn doonaa xabsi taas beddelkeed.
Carruurta lagama kaxayn karo labbadooda masuul ee sharciga ah. Ilmaha waxaa xabsi
lagu hayn karaa ugu badnaan 72 saacadood. Haddii ay jiraan asbaabo gaar ah, wakhtiga waxaa loo kordhin karaa 72 saacadood, si kastaba ha ahaatee weligeed intaa kama dheeraan doonto.
Goobta meel kale oo aan ahayn xarunta Xidhida Wakaalada Socdaalka Swedishka
Marka lagu xidho Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay go’aan ku gaadhi kartaa in adiga, beddelka halkii aad ka joogi lahayd xarumaha xidhida ee Wakaalada Socdaalka Swedishka, lagugu hayo xarumaha xidhida booliska kuwan hoostaga xidhida ama mid ka mid ah Xabsiga Sweden iyo Adeegyada Tijaabinta ku meelgaadhka ah ee xarumaha xidhida ama xabsiga. Tani waxay keliyta ku habboon tahay kuwan ka ah 18 sano jirka ama ka wayn.
Wakaalada Socdaalka Swedishka waxay gaadhi kartaa go’aanka noocan ah haddii
Waxaa lagugu xukumay mastaafurin sababtoo ah gelitaanka fal dembiyeed oo ma habboona inaad joogto xarunta dadka lagu xidho.
Waxaa lagugu hayaa meel ka gooni ah maxaabiista kale oo waxaad khatar ku
tahay badbaadada kuwa kale ee xarunta xidhida.
Waa lama huraan arrimo farsamo iyaddoo la xidhiidha in gaadiid lagu qaado, si
kastaba ha ahaatee wax aan ka badnayn saddex maalmood, ama
waxaa jira sababo ka reeban, tusaale ahaan, fulinta dhici doonta ee safarka
Wakaalada Socdaalka Swedishka sidoo kale waxa dhici karta, muddo wakhti gaaban, inay u gayso kuwan qaba go’aanka khuseeya xidhida booliska ama Xabisga Swedishka iyo Adeega Muddo tijaabinta, marka gaadiid ku qaadista uu soo habbaynayo mid ka mid ah xarumaha xidhida Wakaalada Socdaalka Swediska.
Rafcaanka go’aanka in meel kale la geeyo
Haddii lagu geeyo xarun xabsi, xarun xidhida ku meel gaadhka ah ama boolisku meel kugu hayo, waxaad tan rafcaan kaga qaadan kartaa maxkamadda rafcaanada socdaalka. Waa inaad rafcaankaaga u soo gudbisaa Wakaalada Socdaalka Swedishka wakhti aan ka dambayn maalinta aad hesho nuqulka go’aanka ama haddii kale lagugu wargeliyaa iyadda.
Ku socoto adiga oo dooni inaa soo booqatid qof joogo goob xafidan
Dhammaan booqashooyinka waa inaa koow ballan suubsatid. Waa qasab in adiga koow la soo xiriirtid qofka joogo goobta xafidan, maadaama asaga ama ayada baa kuu suubin wakhti ballan booqasho. Hey’adda socdaalka waxey ugu badnaan oggolyahiin caadiyan labo qof oo waaweyn halkii booqoshaba. Xaaladaha qarkood Hey’adda socdaalka waxey go’aaminkarta booqashada in la ilaaliyo. Taasna micnaheeda tahay in shaqaalaha Hey’adda socdaalka ey kulanka joogeyso. Hey’adda sodaalka xaaladaha qarkood wey u diidikarta qofka goobta xafidan joogo in booqosha loogu imaado.
Goobta xafidan waxey leedahay armaajooyin la xirikaro oo meeshas baa adiga booqasho ugu imaan ku xiran haddii jaakad, boorso ama wax kale wadatid inta aadan booqashada bilaabin ka hore. Marka aad imaatid baa laguu sheegi xeerarka iyo nidaamka goobta.
Waxkasto aad horey usoo qaadatid waa inaa koow ansaxino
Dhammaan waxkasto aad horey usoo qaadatid oo dooneysid inaa siisid qofka joogo goobta xafidan waa qasab in Hey’adda socdaalka ey ansaxiso. Qofka joogo goobta xafidan ma loo oggola khamri, waxyaabaha kale oo lagu marqaamo ama qalab qof isku dhaawaci karo ama qofkale.